Global Voices teny Malagasy · Izahay
Izahay	Misy vitsivitsy ny mpandika lahatsoratra ho amin'ny teny malagasy ato amin'ny Global Voices amin'izao fotoana anoratana eto izao .
Manana mpanitsy lahatsoratra nadika telo aloha izahay dia i:
Jentilisa monina eto Antananarivo, Madagasikara. Mpandika lahatsoratra ato amin'ny Global Voices teny malagasy nanomboka tamin'ny 11 septambra 2007.
Avylavitra monina eto Antananarivo, Madagasikara. Mpandika lahatsoratra ato amin'ny Global Voices teny malagasy nanomboka tamin'ny 10 martsa 2008.
Tomavana monina any Geneve, Soisa. Mpandika lahatsoratra ato amin'ny Global Voices teny malagasy nanomboka tamin'ny 24 septambra 2007.
Ireo mpandika lahatsoratra mavitrika amin'izao fotoana izao kosa dia ireto manaraka ireto:
Lila monina ao Antsirabe, Madagasikara. Mpandika lahatsoratra ato amin'ny Global Voices teny malagasy nanomboka tamin'ny 10 desambra 2008.
Candy monina eto Antananarivo, Madagasikara. Mpandika lahatsoratra ato amin'ny Global Voices teny malagasy nanomboka tamin'ny 17 jolay 2009.
Miora monina eto Antananarivo, Madagasikara. Mpandika lahatsoratra ato amin'ny Global Voices teny malagasy nanomboka tamin'ny 17 jolay 2009.
Zhhantar monina eto Antananarivo, Madagasikara. Mpandika lahatsoratra ato amin'ny Global Voices teny malagasy nanomboka tamin'ny 3 jolay 2010.
Erikah monina eto Antananarivo, Madagasikara. Mpandika lahatsoratra ato amin'ny Global Voices teny malagasy nanomboka tamin'ny 3 jolay 2010.
Nancy monina eto Antananarivo, Madagasikara. Mpandika lahatsoratra ato amin'ny Global Voices teny malagasy nanomboka tamin'ny 16 Oktobra 2010.
Ariniaina monina eto Antananarivo, Madagasikara. Mpandika lahatsoratra ato amin'ny Global Voices teny malagasy nanomboka tamin'ny 2 Novambra 2010.
News2dago monina eto Antananarivo, Madagasikara. Mpandika lahatsoratra ato amin'ny Global Voices teny malagasy nanomboka tamin'ny 6 Novambra 2010.
Mamisoa monina eto Antananarivo, Madagasikara. Mpandika lahatsoratra ato amin'ny Global Voices teny malagasy nanomboka tamin'ny 22 Febroary 2011.
Finoana monina eto Antananarivo, Madagasikara. Mpandika lahatsoratra ato amin'ny Global Voices teny malagasy nanomboka tamin'ny 28 Mey 2011. (25 jona 2011 no voasoratra eo amin'ny mombamomba azy saingy mbola nozahana ny fahazotoany).
Nirinandrea monina eto Antananarivo, Madagasikara. Mpandika lahatsoratra ato amin'ny Global Voices teny malagasy nanomboka tamin'ny 02 Jolay 2011. (02 jolay 2011 no voasoratra eo amin'ny mombamomba azy ).
Miranah monina eto Antananarivo, Madagasikara. Mpandika lahatsoratra ato amin'ny Global Voices teny malagasy nanomboka tamin'ny 07 Jolay 2011.
Rado monina eto Antananarivo, Madagasikara. Mpandika lahatsoratra ato amin'ny Global Voices teny malagasy nanomboka tamin'ny 25 Jona 2011.
Naomy monina eto Antananarivo, Madagasikara. Mpandika lahatsoratra ato amin'ny Global Voices teny malagasy nanomboka tamin'ny 1 Desambra 2012.
Ntsoa monina eto Fianarantsoa, Madagasikara. Mpandika lahatsoratra ofisialy ato amin'ny Global Voices teny malagasy nanomboka tamin'ny 4 septambra 2014.
Tantely monina eto Antananarivo, Madagasikara. Mpandika lahatsoratra ofisialy ato amin'ny Global Voices teny malagasy nanomboka tamin'ny 4 septambra 2014.
Nampiana ny 02 Desambra 2014 18:30 GMT